TSY MAHATOKY TENA NY FITONDRANA HVM : Mamaky ady amin’ny Fiangonana Katolika
Marefo, io no azo amehezana ny fitondrana Hvm izay mijoro ankehitriny. Tsy matoky ny Valera ananany intsony ireo mpitondra ka manao izao karazana fomba mamohehatra rehetra izao hampiharana ny jadona. Hatramin’ny fiangonana ihany koa dia lasibatra amin’izany ankehitriny. 16 avril 2018
Azo ambara fa tsy zakan’ny mpitondra mihitsy ny fihetsiketsehana rehetra ataon’ny filohan’ny tetezamita Andry Rajoelina. Na amin’ny endriny inona io na amin’ny endriny inona, manao izay ho afany amin’ny fampisehoana ny heriny sy didy kofehy lehibeny ny fitondrana Hvm izay tarihan’ny Filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina.
Fantatra fa taorian’ilay fanasana azon’ny filohan’ny tetezamita mivady tany amin’ny fiangonana katolika Notre dame de Lourde Soavinandriana diosezin’i Miarinarivo herinandro vitsy lasa izay dia miseho ankehitriny ny endrika fanasaziana ho an’ity fiangonana katolika ity. Araka ny loharanom-baovao voaray dia nilatsaka ny didy avy amin’ny fanjakana tamin’ny alalan’ny lehiben’ny Distrikan’i Soavinandriana fa tsy azon’ity fiangonana ity intsony ny manao famoriam-bahoaka.
Marihina fa tsy endrika mamofopofona politika ihany akory no voakasik’io fanakanana io fa na hatramin’ireo hetsika fialamboly hokarakarain’ity fiangonana katolika any Soavinandriana ity sy ireo ratsam-pikambanana eo anivon’ny fiangonana mba natao hitadiavam-bola aza dia tsy maintsy atsahatra noho io didy nilatsaka io. Tafiditra ao anatin’izany ny fampisehoana saika hataon’i Black Nadia any an-toerana, torak’izany ihany koa ny fiakarana an-tsehatra saika handraisan’i Dadi Love anjara ao Ankaranana ary ny fampisehoana saika hataon’i Rossy. Ho an’ity farany manokana dia voalaza fa efa nisy ny taratasy nalefany teo anivon’ny primatiora mahakasika indrindra an’io fandraràna azy tsy hanao fampisehoana io ary andrasana izay valiny hatreto.
Manjaka tanteraka ankehitriny ny jadona. Porofo ihany koa izao ny fahatahoran’ny mpitondra ny olona izay heveriny ho mpifaninana matanjaka aminy mandritra ny fifidianana. Tsy mifidy sehatra hampiharana ny fahefany ny Hvm fa rehefa mamofopofona ireo mpifaninana ara-politika aminy dia saika iharan’ny antsojay avokoa. Tahaka ny nahazo ny lehiben’ny Distrikan’Ambilobe izay nalàna tamin’ny toerany taorian’ilay fandalovan’i Andry Rajoelina tany an-toerana.
Teo ihany koa ny fikasana ny hanaisotra ny ben’ny tanànan’i Mahajanga taorian’ilay hetsika nokasain’ny Mapar tsy tanteraka farany teo iny. Ary izao indray dia any amin’ny fiangonana mihitsy no milatsaka ny jadona rehefa voaasa mba hanatrika ny fotoam-pivavahana sy nametraka ny vato fehizoro tany Soavinandriana ny filoha Andry Rajoelina.